खुशीको खबर ! नेपालमा को’रोना जित्नेको लहर ७ हजार ७५२ जना निको भए – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/खुशीको खबर ! नेपालमा को’रोना जित्नेको लहर ७ हजार ७५२ जना निको भए
काठमाडौँ, २४ असार । वुधबार थप २ सय ५३ जनाले को’रोना जितेका छन् । पछिल्ला केही दिनमा सं’क्रमणको दर घट्दै गएको चर्चा भइरहेका बेला निको हुनेको संख्या पनि बढीरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्तालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार गत २४ घन्टामा २५३ जना कोरोना निको भएर घर फर्किएका छन् । यससँगै नेपालमा को’रोना निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या ७ हजार ७५२ पुगेको छ ।
थप २५५ जनामा को’रोना देखिएसँगै सं’क्रमितको संख्या १६ हजार ४ सय २३ जना पुगेको छ । प्रवक्ता गौतमका अनु्सार हाल धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र हुम्ला गरी ५ जिल्लामा नयाँ को’रोना संक्र’मित भेटिएका छैनन् । ५ सय भन्दा बढी सं’क्रमित भएका जिल्लाहरुमा महोत्तरी, रौतहट, पाल्पा, अछाम, कैलाली, बाजुरा रहेका छन्
वुधबार थप २ सय ५३ जनाले को’रोना जितेका छन् । पछिल्ला केही दिनमा सं’क्रमणको दर घट्दै गएको चर्चा भइरहेका बेला निको हुनेको संख्या पनि बढीरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्तालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार गत २४ घन्टामा २५३ जना कोरोना निको भएर घर फर्किएका छन् । यससँगै नेपालमा को’रोना निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या ७ हजार ७५२ पुगेको छ ।
नयाँ सरकारका विषयमा एमालेको नेपाल–खनाल समूहमा विवाद